🏡 Ụlọ | Gaa na Hultsfred
Na-ehi ụra nke ọma na nso okike!
Ịchọrọ iteta n'obere ụlọ dị n'etiti ọhịa na-enweghị ọkụ eletrik ma ọ bụ ndị agbata obi, ma ọ bụ na ị na-ahọrọ ibi n'ime ụlọ iji nwee ike ịme kọfị ụtụtụ nke gị, ka ụmụaka nwee ọnụ ụlọ nke ha ma nwee ike. ka ị dọba ụgbọala n'èzí eriri? N'agbanyeghị ụdị ụlọ ị họọrọ, enwere ihe maka gị ebe a. Ụlọ nke ụdị niile.